Isiqinisekiso sePasi esinikezwe iYavuz Sultan Selim Bridge Azange Babambe kwakhona
Tuzla Şifa-Çayırova Unxibelelaniso lweBhulorho Umsebenzi wokuQhubeka
Ukulwa ne-Icicles e-Ankara
UMasipala weNqila ye-Ankara, ngakumbi phantsi kweebhulorho kunye neetunjini ezenziwe kukunyibilika kwamanzi ekhephu acoca icicles. Amasebe amasebe wesebe lokucoca iSebe leMetropolitan City [More ...]
I-Balikesir Kiziksa Bridge ilungile
I-Balikesir Kiziksa Bridge I-Balikesir USodolophu we-Metropolitan uYucel Yilmaz usigcinile isithembiso sakhe, i-Manyas County Manyas eyenziwe eKocasay, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge yagqitywa ukwakhiwa. UMasipala oMbhaxa i-Balıkesir, [More ...]
I-2020 Yavuz Sultan Selim Bridge iToll
I-2020 Yavuz Sultan Selim Bridge iToll; Iitoll zeYavuz Sultan Selim Bridge, iperile yesithathu yeBosphorus, yandisiwe kunye nonyaka omtsha. Yavuz Sultan Selim Bridge'nin I-14 pesenti Hike [More ...]
I-2020 Osmangazi Bridge iToll
Kwiminyaka yokuqala yama-2020, iBhulorho yaseOsmangazi yafumana isabelo sayo kwaye iitoll zonyuswa ngeepesenti ezili-14. Iipesenti ezili-14 ukuhamba ngeenyawo ukuya eOsman Gazi Bridge iipesenti ezili-14, ukuwela kusetyenziswa i-Osman Gazi Bridge [More ...]
IYavuz Sultan Selim kunye neefizi zeOsman Gazi Bridge
U-Yavuz Sultan Selim kunye no-Osman Gazi Bridges; Turkey wangena kunyaka omtsha kunangaphambili kwakhona. U-Yavuz Sultan Selim kunye no-Osman Gazi ibhuloho iipesenti ezili-14 baphakamisa imali. entsha [More ...]
Ibhlorho yoNyaka ka-2019 kunye neNgeniso yeendlela eziphezulu zivakalisiwe
Ngexesha eligubungela uJanuwari-Novemba kaNovemba ka-2019, ingeniso evela kwiibhlorho nakwiindlela ezinkulu zabhengezwa njenge-1 bhiliyoni ezizigidi ezingama-823 zeedola ezingama-300 amawaka ezigidi. Ngokwedatha ekhutshwe liCandelo loMlawuli oHola ngokubanzi (KGM), [More ...]
I-Çarşlı Çavuşlu I-Bridge ivulwe ngenkonzo
I-Apprentice Çavuşlu Bridge ivuliwe ukuba isebenze; UMasipala oMbaxa waseKocaeli, obona ukubaluleka kweeprojekthi zothutho kwiindawo zedolophu, uqhuba iiprojekthi eziza kunciphisa ukuthuthwa kwabemi abahlala ezilalini ngaphandle kweziko. Ngokuhambelana, isithili saseKörfez Çıraklı [More ...]